Isofthiwe evelele – Ikhasi 6 – Windows – Vessoft
WindowsIsofthiwe evelele – Ikhasi 6
I-Manycam – isoftware ukuphoqa imiphumela ehlukile yokubuka ekusakazweni kwevidiyo. Isoftware iyakwazi ukusebenzisa i-webcam eyodwa ukusakaza kwizicelo eziningi.
I-Discord – isoftware yakhelwe ukuxhumana ngezwi nangombhalo ngohlu lwezinto ezikhethekile ezihlose ukuthuthukisa ukuxhumana phakathi kwenqubo yomdlalo.
Ithuluzi ukudala collages photo. Isofthiwe iqukethe iqoqo eziyisisekelo amathuluzi okuhlela, a lot of izifanekiso itholakale kanye nemiphumela ezengeziwe.
Isofthiwe osakaza le video zokwakha internet. Isofthiwe isekela ukusakazwa video ukusakaza kusuka computer futhi ikhamera on the popular video amasevisi.
I Kulula ukusebenzisa isofthiwe nge isethi enkulu amathuluzi kanye nokwesekwa ifomethi ifayela ethandwa ukuxazulula imisebenzi ehlukahlukene ehhovisi.
I-Mixsters – isoftware ukudala nokucubungula umculo ngokwezinga lobuchwepheshe. Isoftware isebenzisa ubuchwepheshe bomsindo obuphambili kanye neqoqo lamathuluzi abonakalayo.